[Review] Top 6 Nước giặt nào tốt sạch được tin dùng nhất | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 6 Nước giặt nào tốt sạch được tin dùng nhất | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 6 Nước giặt nào tốt sạch được tin dùng nhất | Muasalebang in Muasalebang
Empilweni, ukuwasha kunzima ngokwemvelo futhi kuthatha isikhathi esiningi kumakhosikazi asekhaya, ikakhulukazi uma izingubo zisenamabala anenkani. Ngakho-ke, isixazululo osidingayo ngaso leso sikhathi ukuthola futhi usithenge okokuhlanza izingubo ngekhono eliphezulu lokuhlanza. Kodwa-ke, imakethe namuhla inezinhlobo eziningi zokuhlanza izingubo ezinezici ezihlukile. Ngakho-ke, ukukhetha umkhiqizo wokuhlanza izingubo ezifanele, ake sibheke ngokushesha ulwazi olulandelayo oluthakazelisayo!
1 Yini okokuhlanza izingubo?
2 Imibandela yokukhetha okokuhlanza izingubo ezingcono kakhulu
2.1 Khetha ngohlobo lokuhlanza izingubo
2.2 Khetha okokuhlanza okugxilile
2.3 Khetha okokugeza izingubo ngephunga nezici
3 Izihlanzi ezi-5 ezihamba phambili zokuwasha yizona ezidume kakhulu
3.1 1. Umshini wokuhlanza izingubo we-Ariel Matic ugcina umbala
3.2 2. Umshini wokuhlanza izingubo oluhlaza
3.3 3. Okuphezulu kulayishwa okokuhlanza izingubo ze-Omo Matic
3.4 4. Isefa yokuwasha izingubo enephunga elimangalisayo lezimbali
3.5 5. Umshini wokuhlanza izingubo we-Lix Aloe Vera
3.6 6. Umshini wokuhlanza izingubo wase-Kirkland Ultra Clean
Yini okokuhlanza izingubo?
Ngokungafani nesithambisa sendwangu noma izimpushana zokuwasha ezivamile, okokuhlanza izingubo kuwumkhiqizo owuketshezi. Ikakhulukazi, kunezithako zokuhlanza, ama-surfactants ukuletha umphumela wokuphula isakhiwo, ukubopha ukungcola ebusweni bendwangu yezingubo. Ngaphezu kwalokho, okokuhlanza izingubo kuthambisa indwangu, kususe ukungcola okunenkani, futhi kugcine umbala wezingubo unjengomusha futhi uvikela ikhwalithi yendwangu.
Enye indlela, okokuhlanza izingubo ine-solubility eqinile emanzini, inika amandla okwenza igwebu kalula, ingashiyi insalela engutsheni. Ngakho-ke, namuhla, abathengi baya ngokuya bekhetha ukusebenzisa amanzi okugeza ngenxa yokuthi kulula, ukuhlanza kahle kanye nokuphepha lapho esetshenziselwa imishini yokuwasha.
Imibandela yokukhetha okokuhlanza izingubo ezingcono kakhulu
Ungase ube nesikhathi esinzima sokukhetha ukuthi iyiphi ongayithenga okokuhlanza izingubo uvumelane nezidingo zakho. Ngakho-ke lapho ukhetha ukuthenga umugqa wokuhlanza izingubo, ungasebenzisa lezi zindlela ezilandelayo ukuze wenze ukukhetha okufanele.
Khetha ngohlobo lokuhlanza izingubo
Ulayini wamanje wemikhiqizo yokuhlanza izingubo uhlanganisa okokuhlanza okuphilayo nokujwayelekile. Lapho amanzi okugeza emvelo ephephile kakhulu, enobungani bemvelo kanye nempilo yabantu. Kodwa-ke, umphumela wokuwasha kanye nephunga akwaziswa ngendlela evamile yokuhlanza izingubo. Ngakho-ke uma ungumthandi wobungani kanye nemvelo, kufanele ukhethe okokuhlanza izingubo zemvelo.
Khetha okokuhlanza okugxilile
Omunye umbandela lapho ukhetha okokuhlanza izingubo Kutuswa ukunikeza okuthandwayo emikhiqizweni yokuhlanza ngefomula egxilile. Ngoba izonikeza ukusebenza kahle okuphezulu ekuhlanzeni izingubo, kanye nokususa izinhlobo eziningi zamabala anenkani njengokudla, uyinki, udaka, njll. Ngaphezu kwalokho, amanzi okugeza agxilile nawo anikeza ukusebenza kahle okuphezulu futhi konga izindleko lapho Dilute ukusebenzisa.
Khetha okokugeza izingubo ngephunga nezici
Uketshezi lokuwasha Ngokuvamile, kuzoba nephunga lokwenziwa ekwakhiweni, ngakho-ke lingathatha indawo ye-conditioner yephunga. Kufanele ukhethe okokuhlanza izingubo ngephunga elimnandi ngokuvumelana nezintandokazi zakho. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo eminingi yokuhlanza izingubo inesithambisa sendwangu, okokuthambisa izingubo, ukugcina umbala, ngaleyo ndlela isiza abasebenzisi behlise izindleko zokuthambisa indwangu kanye nokuvikela izingubo kangcono.
Isihlanzi sezingubo manje sesiwumkhiqizo onamakha ahlukahlukene nezinhlobo. Ngakho-ke, uvame ukubeka phambili imikhiqizo evela kumikhiqizo emikhulu, edumile neyaziwayo. Lokhu kuqinisekisa izinga eliphezulu nokusebenza kahle.
Izihlanzi ezi-5 ezihamba phambili zokuwasha yizona ezidume kakhulu
Usazibuza ukuthi yiluphi uhlobo lokuhlanza izingubo ongaluthenga, olungcono kakhulu? Uma kunjalo, ungalindi, hlola abangu-6 abaphezulu ngokushesha okokuhlanza izingubo phezulu esikubala ngezansi.
1. Umshini wokuhlanza izingubo we-Ariel Matic ugcina umbala
Ulayini we-Ariel Matic wokugeza uketshezi ogcina umbala upakishwa esikhwameni esinesivalo ukuze usize ukwandisa isikhala. Ngaphezu kwalokho, lesi sihlanzi se-Ariel sihlanganiswe kahle ngemibala emihle neyi-premium.
Ngaphezu kwalokho, I-Ariel Matic yokuhlanza izingubo Ukugcina umbala kuphinde kube nohlu lwesithako lwekhwalithi noluphephile. Ihlelwe ngokukhethekile ngezithako ezisebenzayo zomphumela wokuhlanza ophumelelayo, kuhlanganiswe nobuchwepheshe bokuhlanza okujulile. Iqinisa ukususwa kwamabala, ikhanyise futhi ihlanze izingubo ngokuwasha okukodwa okusheshayo. Ngasikhathi sinye, umkhiqizo usetshenziswa ne-enzyme biotechnology, ngaleyo ndlela usiza okokuhlanza izingubo ze-Ariel Matic njalo ukuqinisekisa ukuvikeleka okuphelele kwezindwangu, imvelo kanye nempilo yabasebenzisi.
I-Ariel Matic Laundry Detergent igcina umbala futhi inokuthungwa okuwuketshezi, ngakho incibilika ngokushesha okukhulu emanzini. Ivumela ukususwa kalula nangempumelelo kwamabala, kungashiyi insalela yensipho engutsheni ngemva kokugeza. Ngaphezu kwalokho, lesi sihlanzi se-Ariel Matic sinefomula eyingqayizivele engenakho nje kuphela ikhono lokuhlanza izingubo kodwa futhi inikeza iphunga elimnandi elihlala njalo, eligcina umbala wendwangu njengento entsha.
Intengo yesithenjwa: 170,000 VND / 3.25kg.
2. Umshini wokuhlanza izingubo oluhlaza
I-Dnee laundry detergent, eyaziwa nangokuthi i-Dnee fabric softener, iwumkhiqizo odumile osuka eThailand. Umugqa womkhiqizo wokuhlanza izingubo we-Dnee manje usunamaphunga amaningi ahlukene anemibala emi-4 ehlukene. Lapho uketshezi lokuwasha oluluhlaza lwe-Dnee luwuketshezi lokuwasha oludume kakhulu noluthengiswa kakhulu emakethe namuhla. I-Green Dnee inephunga elilula nekhono lokuhlala isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, iphunga lifanele iningi labathengi baseVietnam, liphephile futhi alicasuli esikhumbeni.
Izithako eziyinhloko ku Dnee okokuhlanza izingubo okuluhlaza kuhlanganise: I-Sodium Lauryl Sulfate, i-Sodium Laureth Sulfate, i-Dimethylammonium Glyceryl Monostearate, i-Polyacrylate, … Ngokuvamile, lezi zonke izithako ezisiza ukuhlanza amabala, zinekhono lokunciphisa umbala wezingubo. Ikakhulukazi ngengxenye ye-polyester, umkhiqizo usiza futhi ukuvimbela amabala ukuthi abuyele ngokuphumelelayo. Ngakho-ke ngohlu lwezithako eziyingozi neziphephile njengalezi, lolu ketshezi lokuwasha lwe-Dnee oluluhlaza luyisinqumo esihle komama.
Intengo yesithenjwa: 165,000 VND / 3lit.
3. Okuphezulu kulayishwa okokuhlanza izingubo ze-Omo Matic
Lo mkhiqizo wokuhlanza izingubo we-Omo Matic wasungulwa futhi wasakazwa uhlobo oludumile lwamazwe ngamazwe lwe-Unilever. Ikakhulukazi, okokuhlanza izingubo ze-Omo Matic ezilayisha phezulu kunomklamo ofanayo nowezinye izinhlobo zezinto zokuhlanza izingubo, ezinethoni ebomvu ekhanga iso. Ngefomula eklanywe ngokukhethekile, inikeza ukusebenza okujulile kwayo yonke imishini yokuwasha imithwalo yangaphambili.
I-Omo Matic yokuwasha izingubo Lo mnyango ongaphezulu ubuye uthuthukise amandla angu-3X, ngaleyo ndlela ujike kahle amabala anenkani esigubhuni, kuyilapho uhlinzeka ngezinzuzo ezi-3 ezivelele: ukucwenga, ukugqama kanye nokushwibeka okuvelele kwamabala. Ngaphezu kwalokho, umnyango ophezulu i-Omo Matic inephaneli yezingxenye ezisebenzisa kuphela izinto ezingavuthiwe zekhwalithi ephezulu, ezihlangabezana nezindinganiso zamazwe ngamazwe zokuwohloka kwemvelo kanye nokuphepha kwezinga eliphezulu. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ubuye ube nenhlanganisela yamafutha ephunga elimnandi esiza izingubo ngemva kokugeza ukuze zihogele kahle usuku lonke.
Ikakhulukazi, uketshezi oluwasha olulayisha phezulu lwe-Omo Matic lubuye lube nezithako ezisebenza kancane uma luqhathaniswa nezinye izinto zokuhlanza izingubo ezijwayelekile, ngakho lungasetshenziswa nasemishinini yokuwasha enokuvikela okungcono kakhulu. Lolu ketshezi oluwasha lwe-Omo nalo luncibilika kalula futhi lungene ngokujulile ku-fiber ngayinye ngaphandle kokuhuzuka, lunikeze umphumela omuhle wokugcina umbala.
Intengo yesithenjwa: 85,000 VND / 1.7kg.
4. Isefa yokuwasha izingubo enephunga elimangalisayo lezimbali
Lona futhi umugqa wokuhlanza izingubo ovela eqenjini elidumile le-Unilever kanye ne-Omo Matic. Lo mkhiqizo ukhiqizwa ngobuchwepheshe besimanje bokuhlanza igwebu le-Oxygen, ukususa ngokuphumelelayo amabala, amabala okugcoba, iphunga elibi. Ngaphezu kwalokho, ukuthungwa kwe-Surf laundry detergent enephunga lezimbali kugxilile, kungena kujule endwangu ngayinye kanye nephunga elingapheli eligcwele umuzwa wokusha, okusiza izingubo zakho zizwe kahle usuku lonke.
Ngaphandle kwalokho, umkhiqizo Isefa sokuhlanza izingubo esinephunga elimangalisayo lezimbali Iphinde ibe nefomula elungiselelwe enenani eliphezulu lezithako ezisebenzayo. Kuhlanganiswe nezithako ezisebenzayo zemvelo ezingalimazi isikhumba sesandla kanye nekhwalithi yendwangu. Ngenxa yalokho, okokuhlanza izingubo ze-Surf kuyasiza ukuletha imiphumela emihle, ikakhulukazi esinyathelweni sokuqala sokwelapha, esingaba nomthelela wokuhlanza ohlaba umxhwele.
Mayelana nomklamo, okokuhlanza izingubo ze-Surf kunomklamo wokupakisha omuhle futhi kanokusho onombala ophinki ohlaba umxhwele. Okokuhlanza izingubo kuyatholakala emabhodleleni noma ezikhwameni ezinompompi, okwenza kube lula ukusebenza futhi kube lula kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 125,000 VND / 3.8 kg.
5. Umshini wokuhlanza izingubo we-Lix Aloe Vera
I-Lix Aloe Vera iwuketshezi oluwashayo olusebenzisa ubuchwepheshe obusha ekukhiqizeni uhlobo lwe-Lix. Umkhiqizo unamandla okususa wonke amabala anenkani engutsheni njengamafutha, ikhofi, ukudla …. Ukuthungwa kwesihlanzi sokuwasha kusesimweni esiwuketshezi, ngakho sinokuncibilika okuhle, ukunamagwebu okuzinzile kanye nekhono lokungena lijule kwindwangu ngayinye.
Ngaphezu kwalokho, ngobuchwepheshe obuhle bembewu yempepho, I-Aloe Vera yokuhlanza izingubo Futhi ngomphumela wokugcina iphunga elihlala njalo ezingutsheni. Ngaphandle kwalokho, uketshezi lokuwasha lwe-AloeVera luhlukaniswe ngamakhono amaningi ahlukene ukuze abasebenzisi bakwazi ukukhetha ngokwezidingo zabo. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo wokuhlanza izingubo ufana negama elisikiselayo uma kuziwa kufomula egxilisiwe engu-2X futhi unephunga elimnandi, ukuze ukwazi ukonga imali eyengeziwe uma ungadingi ukusebenzisa isithambisa sendwangu.
I-Lix Aloe Vera yokuhlanza izingubo ikhiqizwa emigqeni yesimanje yezobuchwepheshe, netafula lezithako eziyingozi. Ngakho-ke umkhiqizo uphephile empilweni yesikhumba yezandla zomsebenzisi, awubangeli ukuzwela noma ukungezwani komzimba nezinto ezithile.
Intengo yesithenjwa: 130,000 VND / 4kg.
6. Umshini wokuhlanza izingubo wase-Kirkland Ultra Clean
Umugqa wokugcina womshini wokuwasha izingubo esifuna ukuwethula namuhla ubizwa nge-Kirkland Ultra Clean detergent. Umkhiqizo wakhiwe ngezinsipho zemvelo nama-anionic surfactants. Ngaleyo ndlela kuhlinzeka ngokususa okusebenzayo kwamabala, amabala namafutha ezingutsheni. Ngaphezu kwalokho, izithako ze-sodium zemvelo ezifana ne-sodium carbonate zikhona emkhiqizweni womphumela wokuthambisa wezindwangu. Njengoba ingxenye ye-sodium silicate isebenza njenge-ejenti yokuvikela umshini wokuwasha, i-sodium sulphate iyi-ejenti evelele yokulawula ikhwalithi yezingubo.
Ikakhulukazi I-detergent yaseKirkland Inephunga elithambile, lemvelo futhi eliphumuza ngempela, ngakho umphumela uhlala ezingutsheni zakho isikhathi eside usuku lonke. Ngaphezu kwalokho, iphinde inikeze umuzwa okhululekile kakhulu, indwangu ayiwomi noma ishiye insalela yamanzi okugeza. Ngaphandle kwalokho, lo mkhiqizo owuketshezi wokuwasha usetshenziselwa zonke izinhlobo zemishini yokuwasha, ukuhlanganisa izithako zemvelo eziyi-100% ngaphandle kwamakhemikhali, izithasiselo zokwenziwa ukuze kuqinisekiswe ukuphepha okuphelele kwabasebenzisi.
Intengo yesithenjwa: 550,000 VND / 5.73L.
Uketshezi lokuwasha ngokuya ethandwa futhi kancane kancane bathambekele esikhundleni impushana yokuwasha kanye nendwangu softener. Ngakho-ke sithemba ukuthi ngokwabelana kwanamuhla okuthakazelisayo, uzokhetha uketshezi olufanele lokugeza. Ngenxa yalokho, iletha ukuhlanzeka, iqinisekisa izinga lezindwangu kanye nokugcina iphunga elimnandi usuku lonke.
Phụ kiện Cáp Apple USB-C to Lightning Cable – Chính Hãng giá rẻ | Muasalebang